Murerezi High School, Bag 609,Zvishavane, Zvishavane (2022)
Home > Zimbabwe > Zvishavane > Schools & Colleges > Murerezi High School
HIE MUREREZI GUYS CY KWAMURI MESE UKO
We are what we are because they took their time , strength, love and their knowledge to produce the real us. I thank them, may the good Lord bless them and their families amen
Ndokumba ka uku
Chibaya high school
Any hippop yung ni**az from zim ,upc ,iam GKC
or those hu ar starving for money ,upd
Vanonditsvaga ndibatei Apo 0625898402 dats my app no thanks
Hie I'm Sanda Brighton
A wonderful developing High school that provides quallity education which is situated in Mberengwa District,south of Zvishavane.Sweet comes from sweat!
Photos from Murerezi High School's post
Dear Murerezi, gather your children and work towards creating something to sustain you. Even if it is too small,a 1000 miles journey began with a single step. Good morning
It's evident that things are not going well in the community, economically, but these problems will never outweigh the power and potential of knowledge. Education is still and will remain the KEY.
Vanoda kubata makozho trust(shumba)on whats number+263786501075
Kindly follow the link below, we have a Murerezi High whatsapp group, ikoko tinotaura zvizhinji zvinopisa pamwe nekusangana nehama. Please share this
Pane arikutsvakawo musikana Tererai uyo akadzidza nanaChipiwa Mashiri pamwe nanaBelieve. Arikuti 2008 or 2009 Stream
“ESCAPE FROM CHIKURUBHI”
By Tafadzwa Zhou
Kubva mangwanani kunze kwakange kwakazvimbirwa, k**ina kana nyena. Makore raive besanwa muchadengamo, aiti akaita mudunge achibva mabvazuva akananga mavirira pasina nguva wozoona aumba budzi. Budzi riye raisatora nguva robva raputsikawo zvakare. Ndakaramba nddakati ndee, ndichiona mamwe ainge makomo emakore achisimuka kubva kumabvazuva kuye kwakare, akange akachena semukaka asi pasina nguva hawo achinja ruvara rwave rwetsvubvu. Ndakaramba ndakaisa meso angu kuye ndichiita kunge paive nechandaiverenga, ndakanzwa kutinhira kwebhanan’ana nechekure ndikaziva kuti munguva dzine nhatu dzaizotevera mvura yaizotinhanzva. Ndakaramba ndakagara pamushana paye, zuva raiita zvaro mutsimba nemakore, raiti pamwe rikawana mukana rombozvibhenengura richitaridza chimiro charo chese asi pasinazve nguva hero rarohwa ndare, rakwidibirwa mukati megumbezi dema dema kana jena. Maoko angu ainguno chururuka ziya, ndaibvunda kunge rutsanga, pfungwa dzaindikurira. Hero zuva rakaza rikagara makomo riri mukati metsiva iyi, ini ndakange zvino ndogwesherera ndichiritevera. Makore aye ayo ainge asimuka kumabvazuva ndiwo akange atandavara pamusoro pezvikomo zvese zvaive zvakapoteredza napamusoro pezvivakwa zvese zvaive neurefu. Ndichakabiwa mundangariro kudaro bhero rakabva rarira, ndaiziva zvaraireva, nguva yokunorara yakange yakwana. Isu takange tatozvijaira, zvokupinda mugumbezi nenguva dzenhanhatu. Tese takati dungwe rongondo tichipinda mukati, vamwe ndivo vaikwira nemanera vamwewo vachidzikawo pasi. “Ko vakomana vaye vaendepi chaizvo, naiye Wasu wandange ndiinaye apa uyu? Uku kuchange kutungana kwembudzi chete uku. Hazvisi zvemahumbwe here zvandaironga nevakomana ava?” ndakazvibvunza mibvunzo mizhinji yaisave nemhinduro. Pasina nguva ndakabva ndaita mahwekwe naZondo nevakomana vese, takataura kwekanguva kadiki ipapo ndokubva tati panda, waziva kwake waziva kwake doto rechapungu. Chete panoda moyo nzira haisvike, tainge tanonokerwa isu. Takapinda mumakamuri edu tomirira nguva yacho yatainge taronga. Mukuru uye wekuzvikudza akasvikokochekera yake kiyi pamusuwo pangu opfurira kuenda pamberi. Ko aimboziva here kuti isu taive nedzimwe dzataive takagarira? Ini ndakazvirasira pakamubhedha kangu uku hana ichibika zvayo manhanga. Ndainzawa kutya kwandainge ndisati ndambonzwa upenyu hwangu hwese. Kunze kwakataridza kuti mvura yakange yonaya panguva iyi, mhindo yakabva yakodza panzepo. Nguva yatainge taronga yakazokwana, ndakaita sezvatainge taronga asi pandakati panze dhuu ndakabva ndaita mahweke nemumwe wevarindi. Ndakazviona kuti akarohwa nehana sezvandainge ndaitawo asi handina kuda kumupa nguva ndichibva ndamutambidza chamatsenga nzungu,ndichinomuperekedza nechihwiriri chebhutsu achibva aparuma pasi nomuromo.Ipapo ipapo ndakabva ndamuzvuzvurudza ndokumuisa mukakamuri kangu. Ndakamusunga muromo kuti asazochenjedza vamwe,pamusoro paizvozvo ndichibva ndamusunga mbira dzakondo.Ndakamukanda pakamubhedha kangu ndichibva ndamufugidza gudza randaishandisa.Pedzezvo ndichibva ndamukiira mukakamuri kangu.Ndakange ndatononoka, vamwe vakange vatoenda kare. Nenguva isipi takange tave tese zvakare nevakomana vaye.Tiri vashanu.Kwaiti ini,Zondo,Wasu,Kenny naBhondasi.Takasveverera nekuseri kweShashe sezvandainge ndaronga.Gomba ratainge tachera kuseri kweShashe rainobudikira kuMasvingo okupedzisira kwenzvimbo iyi.Takaita chimbi chimbi sembeva tichipinda mumugodhi watainge tachera uye wainobudikira pawaya yekupedzisira chaipo,maminitsi haana kusvika gumi tainge tavepo. “Vakomana tapinda tapinda! Pfeee pfeeeee. Kuswera mangwana ndiyo kisimusi nhaika, ndinenge ndave kutomwa doro newamwe wangu paWatsomba apa. Zvanga zvanyanya, kurarama savaIsiraeiri muEgipita. Icho chingoma chikange choririsa choda kuparuka, vange vanyanya varume ava, tione kuti vachasara vachikinditsa ani, taenda isu,”akataura izvi Wasu achisvetukira pawaya imwechete yakange yangosara pamberi pedu, kupota kuseri chete kwaitove kupinda murusununguko. Wasu akatsika hwaya yepasi achikochekera ruoko pane yepamusoro osimbisa musana wake kunge gonye, hoyo asimudza gumbo achiti atsike imwe hwaya yaitevera, achibva acheuka kumashure otarisa kwataive. Tese takaramba takamira takamutarisa, kuti dzvondo maziso senge takange tave kuchinja moyo nenzvaru yatakange taparura iyi. Takamboramba takati tuzu kudaro kunge nzombe dziriparwizi ini ndokuzoti, “Ayeka, ko zvotoramba takati tuzu pano mati hatizombandanyirwe here? Chinono chakaitwa nengwe varume bere rakazvibatsira richifamba. Honai Wasu akatimirira pahwaya apa uyu, ngatiitei chimbichimbi tibve pano, simbi inorohwa ichapisa iyi.” Tese takabva tamhanyira pahwaya paye paive naWasu, iye paakaonawo touya akabva akanda ruoko rwake pahwaya yepamusoro owedzera kuenda padenga. Pasina chatainge taita pakaita rainge bhanan’ana rakati ‘bhiriri pwaaa bhiriri.’ Takambomira zvataida kuita tichikaanda meso mativi ese kunge mbavha, patakazoti tese meso toakanda kwaive naWasu nechemudenga, takange tatononoka. Ndakaona kumusana kwake kuchibuda chainge chiutsi, akangogwinha kamwechete ndiye zii akanamatira pawaya paye.Tose takangoti kanha nazvo. Ini ndakamboruma muromo wezasi ndichizvipawo simba asi pokupedzesera ndakabva ndatarisa rutivi. Zvekuona munhu achigochwa nemagetsi senyama yenguruve zvakarimbinyura hana yangu iyo yakange yotinhira.Yakange yorova sengoma yembakumba. Pandakatendeudza uso, Wasu akange atove matsito uyo, mutumbi uchitaridza kureruka. Zvaisiririsa. Kurohwa kwakange kwaitwa Wasu nemagetsi zvoreva kuti takange tasara tave vana.Takatarisana newaya iyi yakange yakachengeta huroyi hweKuKariba, magetsi. Hameno zvichida hwaive hwekuHwange.Tainge tatarisana nehondo yatisina kurongera,ini wacho nyakuronga ndaisaziva kuti waya iyi yaive namagetsi.Zano nderipi.Yakange yangove misodzi nekutya muzviso zvedu. Zviya zvokuti varume vakashinga manyepo. Denga raive razvimba zvinotyisa. Makore aive aberekanawo muchadenga ukuwo zvichiperekedzwa nemabhanan`ana nemheni.Rinenge raive rogadzirira kuchemawo k**iiwa kwatainge taitwa naWasu.Mhepo ndiyo yaingonopukuta misodzi yaive muzviso zvedu.Hazvisi nyore kuti munhu angoti sarai,zvikurusei wamanga muinaye.Pwaaa! mheni yakarira zvakare.Parizvino yakanosakadza zimuti remukamba rakange riri pano neapo kubva pataive.Hero kubva mudenga muye nemakuriro aro richinoti pasi zhi,richipotsa padiki diki kundisakadza gotsi.Dai rakandibata ndaibva ndatevera kwaive kwakaenda Wasu. Varume ini handichadi zvekupunyuka izvi,chiendai mega.Ini ndava kudzokera.Zviri kuitika pano hazvitendeseki izvi.Uyu arohwa nemagetsi,izvezvi mheni yave kusarudza kurova muti uri pedyo nesu ichisiya imwe yese.Ayewa tizai mega vakomana.Ini ndave kudzokera zvangu” ndeumwewo wataive naye akataura izvi. Kutya kwakange kwazara matiri. “Vakomana handei mberi hakuna anodzokera shure,shure kune makuva akawanda uku.Tatozvipira kupunyuka huye hatidzokere shure.Kana watodya imbwa wotodya iri yehono, kufa kwemurume hubuda ura.Kubva zuva ratakabvuma hurongwa hwa ‘Survivor’ takagara tarovera moyo padombo.Takaita chisungo.Chemurume chivindi gudo rakapisika nerovambira wani.Kufa kwaWasu nekupotswa nemheni uku hakuna chirevo.Muti uyu watowira pamusoro pewaya iyi yemagetsi,zvoreva kuti uyu Wasu aenda kudenga kuti ativhurire nzira.Tave kukwanisa kufamba nepamusoro pemuti uyu tiende kuseri,” Uyu ndi Zondo aitaura izvi achitonyemwerera zvake.Patiri tose iye chete ndiye aitaridza kusava nematyira. Pakutanga pandaironga nekukaka kupunyuka kwangu Zondo aisava pahurongwa hwangu, aitondiseka achiti iye tsoro yese iyi kwaive kuteya nzou neriva. Kunze kwaizvozvo, Zondo aive munhu aifarirwa uye aiteererwa nevamwe munongoziva kune vanhu vakazvarwa vainohutungamir
iri muropa ravo. Ndozvaive zvakaita muchinda uyu ainzi Zondo. Takazonzwa kurira kwerimwe bhera tikaziva zvazvaireva.Zvaive zvabatwa kuti kune vakange vachida kutiza. Mubairo wacho taimuziva.
Ndakauwanepiko moyo wakadai,
Ndipeiwo mwenje ndizvivhenekere zvimwe ndingaone,
Ndiani nhai? Ko ndiani?
Wangu mubvunzo mumwechete ndiani akandiroya?
Wakadai moyo ndakauwana pai?
Akaita ndipenyerwe nemudzimai wasahwira,
Akafonyora moyo wangu semutobvu,
Pandaimuona hana yaipapamara,kukwidibirwa zvekukanganwa kuti mudziyo wasahwira
Rerudo shoko ndakaripotsera, hanzi k**i kufa ndekupi
Akaoma mate mukanwa, pedzisiro ndongoti indari yandanwa
Akanditadzisa kupfimbika mufungo wakadai murukova,
Panonaya mvura uende zvawo,
Hunzi moyo muti unomera paunoda,
Asi gore riye takaudzura wani musawu wamera mumba yokurara,
Akandipa hushingi hwekurasa wemudanga,
Sahwira wangu wandaichema naye mumatambudziko,
Kwataisienda tose kunhabvu ndoenda naiyeyu Tonderai wekuba mbudzi dzasabhuku,
Akandidai akandipa gona rine manyawi,kuba chabatwa neriva raMunyaradzi,
Ndini wekutanga kuziva mwanasikana akanga atora moyo wake,
Waakanga azvibatira Nakai ano runako runodzima zuva,
Kufamba achiita seanotsika mumakomba etsoro,
Chimiro chake chinotoda vanaNyanduri kutsanangura,
Runako rwake here rwakaita ndidai?
Muchaziva here ndaive parutivi rwake zuva ravakabatanidzwa nemuchato,
Ndichidauka nemufaro, kumera mapapiro,
Zvino ndave wekutanga zvakare kuvaparadzanisa,
Hwandibata hwahwa ndobvunza naiyewo akambondidirei?
Kukanganwa ndewa sahwira,
Pamufananidzo wedu ndipo pandinokurukura naye Munyaradzi,
Hupenyu hwagonzo nachin`ai, nokuda kwaiye Nakai
Pfungwa dzotamba tsiva,
Ndichinan`anura ndiani akandidai,
Ndakatadza hangu vehama,
Tingapomere huroyi nepahusiri,
Huripo huri hwangu ndakapomba newasahwira,
Nguva yaidzorereka makare ndaisvetuka hangu ndoikanda pazvakatangira,
Ndoitawo sahwira AKAVIMBIKA,
Ndozvitsvagira wangu ndega havaperi vanetsika,
Kamweya kekupenyerwa nemudzimai wasahwira ndopfimbika….
BY: ZHOU TAFADZWA
I was born a writer
By Morgan Chihora
Hak**i kare wakange usiri chinhu iwe!,
Zuro chaiye waisemesa asi nhasi wave kuonekerawo.
Ndiudzewo mushonga unokudza nokubwaira neziso zvakadaro.
Zvachitori chisionekwi mudzi webwe!,
Pakukura kwangu ndakatora makore ndichigonya,
Muvakidzani wako chaiye Bayayi zvakamubayawo,
Uyo wekumakomo akati achizvireva Mbuya vake Nehanda ndokusekerea muhapwa.
Vakasekera muhapwa vachiti hauzive here rugare tange nhamo.
Kana zvinin’ina zvako zvandinoona izvo zvinokubikira supwi,
Izvo zvakati runde runde nezvozvo zvakati nenga pazvikomo,
Zvakagurwawo mabvi nokukura kwako.
Kunyange uye wepamhiri apo muponjane,
Akaponja kusara ati forototo, haana romumuromo newe,
Nokuti kukura kwako kwakamukanga mate mumukanwa.
Ndianiko akakupa mavambiro?
Ndianiko akakutambidza mupfudze iwe ukabva wati nyunyurudzei?
Wakaoneiko zvawakazodzoka wopenya nemakore maviri?
Irwo rwizi rwunoerera mauri rwakamboita seiko?,
Zvarunongorera ruchikumba nezvavamwe.
Shoko harigari pasi uye kure kwemeso nzeve dzinonzwa,
Tinongonzwa zvichidzi wave kurera mapudzi muminda yevavakidzani,
Zvinonzi vese nouwandu hwavo voita chipitipiti kuuya kwauri,
Ko wakavaravidzeiko nhai Murerezi?
Chiiko chavakaona pauri chinobwinya kupinda ndarama?
Ndakazvionerawo pamhino sefodya,
Haasi manzwira nzwira aya kwete!,
Munda wako iwe wave zienda nakuenda,
Munda wako mapudzi mavhu nemarara,
Wakambovabikireiko zvavanongoimba manhanga kutapira?
Wakavapeiko zvavati gotsi papata kudaro?
Chaunovabikira chinenge chidokori mushonga wamavende,
Unenge unobika dzvetera matadza nzungu dzechinanzvirwa,
Zveshuwa unenge unobika mudya ndakasungwa chaiwo.
Pasi rese vave kuziva nezvako.
Nyika yese yeZawe vave kuziva nezvako.
Vave kuziva kutapira kwezvibereko zvako,
Vazhinji vave kutopindwa nechindoendawo,
Vazhinji vave kutosunga dzavo kuti vazoisa rwavo rutsoka pachivanze chako,
Wakavakwezva noumhizha hwako Murerezi.
Ndizvo zvotongonzwa norunyerekupezve!,
Tongonzwa kuti makore ano unobika zvireyi bedzi.
Kubuda kwako mugota kwandishamisa ini.
Kukura kwako kwako kwandigadzikisa mapfumo pasi,
Murerezi unondishamisa ini!
for more stories and poems follow the page
Morgan Chihora is my name and writing is in my veins,I was born like that. This is where I share my books and stories. I am the writer and legitimate publisher of the writings.
Ndobva tangoti zvedu pfeeeee paTurn Off yeMponjane iyi, ndiani anopaziva apa?
MOYO WAYNE ATAURA
Mrerezi High Class of 2010
When I think of my classmates “the 2010 yakambonetsa” i remember the best days I had at school. The love we shared, the openness. Let me not beat about the bush n recall the names as I remember them
1. Tafadzwa Zhou (Loxondoter, Zhox)
2 .Morgan Chihora (Bayo)
3. Patience Bhobho (Mnico)
4. William Maphosa (Majaka)
5. Fritz JJ Zhou (Zola)
6. Alexander Ngwenya (Papa Ngwee)
7. Netsai Zindoga (Our Headgirl)
8. Shoko Tigerenashe (Headboy)
9. Kenneth Ruchaka (Kenruck)
10. Prosper Bvurire (Matutuva)
11. Lindiwe Masungenyoka (Munde)
12. Sarudzai Sithole (Stodza)
13. Prince Moyo (Spraga)
14. Osward Shumba (Tshaka)
15. Sarudzai Mdlano
16. Sincerity (Sincy)
17. Bridget Hungwe (Braille, Murwarele)
18. Sabbinah Dzibakwi (D.Z)
19. Ndinatsei Hove (Dread,Rasta,One love)
20. Faith Moyo (Fayie)
21. Sheperd Shavira(Shavira)
22. Sabbina Musikavanhu (Xabi)
23. Farai Matare (Fatso)
24. Lainah Hove
25. Hove Anderson (Under)
26. Gay Mawarire (Handingatadze Kuribata)
27. Munyaradzi Hove (Murn Hoev)
28. Constance Madondo
29. Vimbai Ncube
30. Grace Shava (Seke Mutema)
31. Ultimate Mateketa(Taxi,Maninin)
32. Rejoice Mabika (Rijoh)
33. Sheron Nyoni
34. Janitor Benkie (Jom Bee)
35. Maclinate Masukume(Maq)
36. Tafadzwa Shangwa(Shangwa)
37. Sibonokuhle Sogogwane
38. Expensive Maphosa(EXP1)
Ndoziva vanhu vanotyira mabundles, so here z what we will do. We “WILL NOT” create a WhatsApp group but u never know who might want your #..Comment with your number hama dzangu.
*Last number yekukara*
*Ambuya* : Mukwasha hamuchisina muriwo, ko shiri munodya here?
*Mukwasha* : Pane zvose zvinobhururuka chandisingadye indege.
Wakambonakirwa neTea zvekuti unofunga kuti dai waive Lobengula waitengesa zvese neMozambique
Pfee zvedu paMhlambi
Oxford University Fully-Funded Scholarships 2017 The Oxford University is inviting applications for Louis Dreyfus-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and
“I do not believe in failure. It is not failure if you enjoyed the process.” – Oprah Winfrey.
Author: MORGAN CHIHORA
Payakangoti motokari yangu ba, Tivanzwe yakabva yaita chamupupuri kuuya zvayo ichimhanya. Yakange yarwadziwa kuswera zuva rese isina kumbondiona. Imbwa yaindifarira iyoyo. Yaiti zvayo muswe tsviki tsviki,ichimhanya iri padivi pemota. Ndakasvika zvangu ndokumisa motokari yangu panzvimbo yayo ukuwo Tivanzwe yaingunouruka uruka. Kamuzukuru kangu Luois ndopakandimhanyira kaona ndichivhura bhutu remotokari, kangasvikonditi gumi rakadya vaviri, tichiti tese pasi njo.”Heyi muzukuru zvawave kundikuvadza. Chisimuka kani hona wandidonhedza. Chitora mapepa ayo ari mumota uende nawo kunambuya”, ndaitaura zvangu ndichipukuta mavhu ainge azara pambatya dzangu. Izvi zvakamufadza zvikuru kuti ainge andidonhedza. Munoziva izvo zviya kana pamba paine mwana panonakidza. Kana paine pwere, kunyange mukatamba mese kamutambo, chimbopota muchipa pwere kamukana kekukunda. Izvi zvinozoita kuti pwere ikure ichiziva chinonzi kukurira.
“Ahh, mwanangu ko wazvinetsereiko nokutenga iwo masaga etunonaka kudai? Kungoenda kwako kudhorobha wotobva netunonaka. Mari inoda kuchengetedzwa mwanangu manje manje unenge watova musoro,baba chaivo. Handiti urikuchata nomugovera iwoyu. Potawo uchisungirawo mari kwete zvokungoti pano neapo watengera amai tunonaka nembatya pamwe nemidziyo. Muchaneta achada kuchengetwa,heya”, vakadaro havo amai vachiombera apo vaigashira zvinhu zvavaingunopihwa nomuzukuru wavo kubva mumotokari. Ndakavataurira kuti ivo vaifanira kudya simba rangu kusvika zvanaka. Ndini ndaiva mwana womukomana saka kana ndaitadza kuchengeta amai vangu vaizochengetwa nani chaizvo, izvi ndinovimba kana Muchaneta chaiye aitozozvinzwisisa bedzi.
Zvakazondishamisa pandakaona Tivanzwe ichimiramira pamberi pangu kunge yarasa zvipanera. Yaingunoundunduka iri pamberi pangu. Ndakabvunza amai kuti chii chaizvo chainge chaitika ivo vakati yainge yaramba kudya masikati iwayo. Yaigorambirei kudya chaizvo? Zvaive pachena kuti yaive nenzara. Ndakati kamuzukuru katarise chikafu cheimbwa mumba auye nacho. Panguva iyi haina kuramba. Inenge yaitova nemaroweso imbwa iyoyo. Yaishaina kunge inomukira kumunda.
“Ko iwo meso ako akagoti una una kwakatonaka here? Tiudze urwere hwamai vaMucha hwave papi?”, vakabvunza vachikutidzira hari yavo. Moto wacho waitaridza kunetsa kupfuta kwawo. “Tavaendesa kuPrivate Hospital, tavasiya vave nani chose zvakare baba vaMucha varikufumira kubata jongwe muromo vachienda ikoko”,ndakataura zvangu ndichipedzisa kunwa maheu andainge ndapihwa. Ndakada kuenderera mberi ndichivaudza nezvenyaya yekusonwa kwevanhu ndikaona kuti ndinenge ndaigochera pautsi. Izvi zvaitozoperekedza amai kwamupfiga nebwe chaiko,ndakabata hana. Ndakati ngaisiye matambo.
“Mwanangu urichidadiso chomusha uno. Ndizvo saka ndakakuendesa kuchikoro uye ukaziva Mwari. Ikozvino vese vane matambudziko avo muno mumana arikupedzwa newe. Rega ndikubayire zanhi mwanangu, zvauchaitirwa naJehova mangwana zvizhinji. Usarase moyo kana kuteerera vanyengeri, usaitevera mhomho yakabaisa vakawanda. Vimba naMwari wako mwanangu, kana vakati handei neapo ndopakapfava,vasiye iwe enda neboterekwa nomuminzwa imomo nokuti mubayiro urimberi,ndiyo inonzi nduramo mwanangu”, vakadaro amai vachirovanisa zvigutsa zvaive pachoto. Parizvino moto wacho wakange wave kuda kutodzima,
Amai vakange vataura mashoko makuru, kuruma nzeve chaiko. Ipo pakundikomokedza kuti ndingwarire vemhesaniso, vakange vabaya dede mumukanwa chaimo. Amai ndaivadira kuti vairamba chakashata asi chakanaka vachichipa rumbidzo yakafanira. “Amai, maheu andanwa aya adzoka ave kundizvimbira. Regai ndinorara ini. Ndofuma ndichidya changu chikafu mangwana, ndichienda kubasa”, ndakadaro ndave k**imuka zvangu, ndichizvitatamura zviya zvinoita munhu akurirwa nehope. Ko dzaive hope dzechokwadi here? Ko iwo maheu acho aizozvimbira zvokuti munhu aitorarira iwo bedzi? Idzo dzaimbova hope rudzii dzokurara ruvhunza vaeni?
Ndakapinda muimba yangu yokurara kunge ndaipinda muchitokisi. Ndakangoita zvokurasira muviri wangu mukati imomo. Ndakatora nguva refu kwazvo ndakasvinura. Hope dzakaramba kundishanyira zvachose zvakare ini ndaitya kubatwa nadzo nokuti ndaizoerekana ndarota hope dzakafanana nedzamasikati pachipatara paye. Hope dzaityisa kupinda gehena . Zvakazowedzerwawo nokupisa kwaiita kunze musi uyu. Ko kwairarika here?, kwaisararika. Ndakatanga kufunga zvandainge ndaona musi uyu.
Ndakarangarira ndichiona Muchaneta achitungira tsono munyama yomunhu. Ndakarangarira ndichiona maoko make achingwenda ari muropa imomo. Ndakarangarira ndichiona pfuti yaive muruoko rweaisonewa. Ndakarangarira zvese kusvika pakurwadziwa chaiko kwaiitwa vaisonewa ava, ndikange ndave kutonzwa sokuti ndimi ndaisonewa. Ndakavanzwira tsitsi. Zvakange zvakaoma. Dzimwe pfungwa dzakati dai wangodeedzera, dzimwe ndidzo dzaiita makakatanwa dzichiti pfuti yawangoona wega iya, waisonanidzwa magaro nebara.
Nguva dzakange dzaturikidzana, ndinotondera kuti yakange yatove nguva yokutanga yamangwanani, pakati pousiku chaipo. Gukurume rokutanga rakanga ratozvirova rikazhamba, nzara yakange yavepo manje,. Ndakafunga zvokunotora kudya kuimba yokubikira ndipo pandakanzwa foni yangu kuti turi, kutaridza kuti paive nemeseji yaive yapinda. Yakange yabva kunaMuchaneta. Yaiti iyo,”Morgan, ndinofunga kuda kumhan’ara nyaya iyi kumapurisa ini. Ndinoda kudonongora zvese zvirikuitika pachipatara apa, iwe unopaona sei?.” Zvaive pachena kuti mwana wevanhu kurara chaiko ainge atotadza. Hope dzainge dzarambawo kumushanyira.
Ndakaverenga meseji iya rwechipiri, ndikaona kuti Mucha aitoreva idi chairo. Akange ave kuda kutamba namaisva. Nyaya iyi yaisafanira kubuda kana aida kurarama zvine mufaro. Asi ndakaona kuti aisakwanisa kurarama zvakanaka zvakare kana nyaya iyi isina kugadziriswa mundangariro make. Ndakaona kuti mwana wevanhu akange achipika rimwe jere hombe mupfungwa dzake. Ndipo paye pamunozonzwa kuti munhu akazvisungirira, inyaya dzakadai.
Ndakamuka ndikagara pasi. Ndakapfugama ndonyengetera, ndichikumbira mhinduro yezvakanaka kunashe. Maonero angu Muchaneta akange atotema nzira yaaida kugadzirisa nayo nyaya. Ini ndini ndaifanira kumira naye pakuchema kwese uku. Ndaifanira kumuonesa ngozi yaive kumberi kana aizomhan’ara nyaya iyi. Izvi ndaifanira kuzviita tichitaurirana kwete zvepanhare. Ndaitofanira kunoona Mucha mangwana acho ndabva kubasa.
Ko kana iye aingorovera moyo padombo, akafonera mapurisa achimaudza zvenyaya iyi husiku uhwu chii chaizoitika? Ko amai vake varikuchipatara vaizopapona here apa? Ko kana mhondi idzi pamwe nanachiremba vacho vaizotadza kusungwa Mucha aizohwanda kupi chaizvo kwavaitadza kusvika? Ko Mucha aifanira kumhan’ara here nyaya iyi? Ko izvi zvaisazokanganisa muchato here?....... Ini ndakange ndisingachade kurasikirwa naMucha. Kuteurirwa chipfuko chavira here,ayewa kwete.
Get the whole book from a page called,'I was born a writer'
……typing chapter 10
Other High Schools in Zvishavane (show all)
Mabasa Secondary School
Mabasa Goverment Secondary School
Dreamers, Believers and Achievers
FUND RAISING FOR : infrastructure development (classroom blocks, Teachers houses, school hall). : ICT Development